XAALADDA ADAG EE LA SOO GUDBOONAADAY CIIDAMADA MAREEKANKA EE JOOGA CIRAAQ
Waxaa maalmahan isa soo taraya cabbashada is daba joogga ah ee ka imaanaya ciidamada mareekanka ah ee kumanaanka kun gaaraya ee jooga Ciraaq, kadib markii ay welwel iyo walbahaar ku beertay iska caabbinta gaadmada ah iyo weerarada joogtada ah ee maalin walba lala beegsanayo ciidamada Mareekanka ee jooga Ciraaq.
Sida ay warbaahinnada xuseen, celcelis ahaan maalintii waxaa magaalooyinka Ciraaq ka dhaca wax ka badan dhowr iyo toban weerar oo si toos ah loola ugaarsanayo ciidamada Mareekanka ee jooga Ciraaq, iyadoo dhimmasho gaaraya 82 qof iyo dhaawac badan ay gaysteen weeraradaas kadib markii uu madaxweynaha Mareekanka Bush ku dhawaaqay bishii may ee sannadkan inuu dhammaaday dagaalkii uu ku qaadayay Ciraaq.
Haddaba, maalintii shaleey ahayd ayuu taleefishinka sida aadka looga daawado dalka Mareekanka ee ABC soo daayay barnaamij uu ku wareysanayo qaar ka mid ah ciidamada Mareekanka ee jooga Ciraaq. Wareysigii uu taleefishinka la yeeshay ciidamadaas ayaa shaaca ka qaaday welwelka iyo walaaca daran ee ka haysta weerarada iyaga lagu beegsanayo, iyagoo qaarkii la wareystay si toos ah uga dalbaday maamulka Washington inay u fasaxaan inay ku laabtaan qoysaskoodii iyo guryahooda.
“hadduu Rumsfeld halkan joogi lahaa waxaan ka codsan lahaa inuu is casilo” waxaa sidaas yiri mid ka mid ah ciidamada mareekanka ee jooga Ciraaq, halka mid kale oo ka mid ah kooxda saddexaad ee ciidamada mareekanka oo isna la wareystay yiri “ waxaan Rumsfeld weydiinayaa, horta maxaan halkan u joognaa? Ma arko sabab aan halkan u sii joogno”.
Taleefishinka ayaa barnaamijkiisa la yiraahdo “Good Morning america” mid-mid ugu wareystay ciidamada ee jooga Ciraaq, waxayna wareysigooda ku muujiyeen caro kulul oo ay ku tuurayaan madaxdoodii dagaalkan u soo diray, isla mar ahaantaana waxay ku nuuxnuuxsadeen inuu dhammaaday dulqaadkoodii kadib markii loo dheereeyay muddada ay joogayaan Ciraaq. Mid ka mid ah saraakiishii sida daran u dhaleeceenayay maamulka Mareekanka ayaa soo saaray kaarar sida turubka oo kale loo sameeyay kuna xusay dad uu ugu yeeray inay “wanted” yihiin ayna ka mid yihiin Paul Bremer, Donald Rumsfeld, George Bush iyo Poul Wolfowitz.
Ciidamada Mareekanka ee jooga Ciraaq ayaa filayay inay qaar badan oo iyaga ka mid ah ay labadii billood ugu danbeeyay ku laabtaan guryahooda, hase ahaatee waxay taasi fuli wayday kadib markii hoggaamiyaha ciidamada Mareekanka ee Ciraaq uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareekanka loo dheereenayo muddada ay joogayaan Ciraaq, kadib markii xal loo waayay weerarada gaadmada ah ee ku sii badanaya ciidamada Mareekanka ee jooga Ciraaq.
Saajinka lagu magacaabo Felipe Vega ayaa isagu aaminsanaa inuu si dhaqso leh ugu laabanayo isaga iyo ciidamada kaleba qoysaskooda iyo guryahooda, kadib markii ciidamada mareekanka gacanta ku dhigeen magaallada Baghdad sagaalkii bishii abriil ee ina dhaaftay.
Dareenkaas mid la mid ah waxaa isna muujiyay sargaalka lagu magacaabo Terry Gilmore, isagoo si daran uga xumaaday muddada dheer ee loogu daray joogistiisa Ciraaq. “markaan xaaskayga u sheegay inaan si dhaqso leh ugu soo laabanaynin dalka waxay durbadiiba billawday inay oydo, anniga xittaa waxaan ku sigtay inaan la ooyo.., aad ayaan uga xumaaday, ma fahmi karo, maxay halkan noogu hayaan kadib markay na soo gaarsiiyeen inaan dalkii ku laabanayno” ayuu oranayay Gilmore.
Weerarada iyo gaadmada joogta ah ee ka imaanaysa ciraaqiyiinta ayaa dhaawici karta yiddiddiilooyinkii ay ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska ay ka lahaayeen Ciraaq. Dhinaca kale, waxaa si is daba joog ah u soo if baxaya maalamahaan dhaleeceenta qayaxan ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah axsaabta siyaasiyiinta ee ka jira dalalka USA iyo Britain, iyagoo ku adkeysanaya inay maamullada labada dal ay soo hor dhigaan asbaabta keentay duullimaadkii khasaaraha lahaa ee lagu qaaday Ciraaq, iyo halkay mareen hubka sida daran wax u gummaada ee lagu eedaynayay inuu haystay maamulkii awoodda loo sheegtay ee Saddaam Xuseen.
Maalmihii dhowaa ee tagay waxay ciidamada Mareekanka ka sameeyeen Ciraaq Gole cusub oo ka kooban 25 xubnood, kuwaasoo danta loo sameeyay ay ugu weyn tahay sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarada lagu ugaarsanayo ciidamada Mareekanka ee jooga Ciraaq.
ISHA: ABC TV abcnews.go.com
WARARKII DAGAALKII CIRAAQ... GUJI
Sawirka ABC TV
Faafin: July 17, 2003